Kooxda PSG oo bedelka Thiago Silva ka raadinaysa horyaalka Serie A… (Waa kuwee daafacyada ay indhaha ku hayaan?) – Gool FM
(Paris) 09 Juun 2020. Sida wararku ay sheegayaan kooxda kubadda cagta PSG ee ka dhisan caasimadda Waddanka Faransiiska ayaa bedelka Thiago Silva waxa ay ka baadi-goobaysaa horyaalka Serie A-da Talyaaniga.
Thiago Silva ayaa qarka u saaran inuu ka tago PSG marka uu dhammaado heshiiskiisa haatan ee kooxda ka dhisan caasimadda Faransiiska.
Warsidaha reer Talyaani ee Calciomercato ayaa rumeysan in PSG ay diiradda saaratay inay bedelka Silva ka raadsato Waddanka Talyaaniga.
Daafaca Kooxda Napoli ee Kalidou Koulibaly ayaa liiska daafacyada ay doonayso PSG fikta sare kaga jira, halka Milan Skriniar oo ka tirsan Inter Milan iyo Alessio Romagnoli oo AC Milan u safta ay sidoo kale noqon karaan xulasho kale.
Daafaca Manchester City ee John Stones ayaa isaguna waxaa suuro-gal ah inuu ka mid yahay xulashada daafac ee PSG, laakiin kooxda Faransiiska waxa ay awoodeeda isugu geynaysaa inay bedelka Thiago Silva ka hesho dalka Talyaaniga.